Madaxweynaha Somaliland oo qalliin caafimaad ku galay Imaaraadka Carabta · Jowhar.com Somali News Leader
Madaxweynaha Somaliland oo qalliin caafimaad ku galay Imaaraadka Carabta
by A M | Tuesday, Aug 22, 2017 | 3333 views
August 22 (Jowhar)— Madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Siilaanyo ayaa howlo caafimaad u jooga dalka isu tagga Imaaraadka Carabta, kaddib markii maalintii jimcihii uu ka ambabaxay Hargeysa.
Qaar ka mid ah Warbaahinta Somaliland ayaa baahiyay in Madaxweynaha qalliin lagu sameeyay, iyadoo Madaxtooyada Somaliland ay si deg deg ah arrintan uga hadashay.
Afhayeenka Madaxtooyada Somaliland Xuseen Deyr oo wariyeyaasha kula hadlay Hargeysa ayaa sheegay in xaalada caafimaad ee Madaxweyne Siilaanyo ay wanaagsan tahay, isla markaana uu maray qalliin yar.
“Jimcihii ayuu Madaxweynaha u baxay baaritaan Caafimaad, Abu dubai ayuu ku sugan yahay, waxaa uu Madaxweynuhu galay baaritaan caafimaad oo hal maalin ah, qabsin ayaa laga qalay, caafimaadkiisana waa wanaagsan yahay 100%”ayuu yiri Afhayeenka Madaxtooyada Somaliland.
Waxaa uu sheegay in qaliinka aanu aheyn mid weyn oo jeexid ah, balse habka casriga ee qaliinka lagu fuliyo ee leesarka lagu sameeyay, isagoo waxba kama jiraan ku tilmaamay sida warbaahinta qaar u baahinayaan.
“Qaliin wuxuu noqon karaa mid farta laga qalo ama wadnaha, laakiin Qaliinka Madaxweynaha wax weyn ma ahan, qabsan ayaa lagaga saaray, qalabkan Teknoolijiyada ee Leysar System ayaa lagaga saaray, maantaba wuu socdaa, xaaladiisa caafimaad waa wanaagsan tahay”ayuu yiri.
Xuseen Deyr ayaa sheegay in Madaxweyne Siilaanyo uu sida ugu dhaqsiyaha badan ugu soo laaban doono Hargeysa, isagoo xusay in galabta uu la balansan yahay Mas’uuliyiin ka tirsan Imaaraadka Carabta.
Bishii tagtay ee July ayay aheyd markii Warbaahinta qaar ee Somaliland ay sheegeen in Madaxweyne Siilaanyo uu xaalad caafimaad u joogo Imaaraadka Carabta, inkastoo markii dambe mas’uuliyiin ka tirsan Somaliland ay beeniyeen.
Axmed Siilaanyo oo 81 jir ah ayaa dhowr jeer oo hore la soo gudboonaaday xanuuno kala duwan, waxaana sanadihii u dambeeyay uu howlo caafimaad u tagay London iyo Imaaraadka Carabta.
Kolonyo ciidamada AMISOM la socdeen oo lagu qarxiyay Muqdisho
Nicholas Kay oo loo magacaabay Safiirka Britain u qaabilsan Afghanistan